Gabagabadii, koorsadan tababarka hal-abuurka ah waxaa loo abaabulay saddex heer:
Module Module hordhac ah oo fool-ka-fool ah oo 2,5 maalmood ah Sebtember 2019.
Lix ikhtiyaar ikhtiyaariga ah ee elektaroonigga ah ee dheeraadka ah ee saacadaha 7 mid walbana loo abaabulay laba marxaladood: maalin badhkeed oo isku mid ah oo waxqabadyo shaqsiyeed ah oo ku yaal barxad gaar ah iyo maalinta kale ee nuska ah ee iswaafajinta kiisaska daraasadda ee fasalka casriga ah .
Qeybahaan waxaa la fulin karaa inta udhaxeysa Febraayo iyo Juun 2020. Waqtiga Asynchronous wuxuu suurta galiyaa in lagu fuliyo modullada sida uu ugu habboon yahay sida ku xusan jadwalkiisa halka fasallada dalwaddu u oggolaadeen dhammaan kaqeybgalayaashu in ay kulmaan si ay jawaab uga helaan tusaale ahaan.
● Dhammaad dabcan, qiimeyn waji ka waji ah 1 maalmood
63 tababarayaal ah, oo ka kala socda 30 qaab dhismeed, ayaa wax laga qabtay intii lagu guda jiray tababarkan dhinacyada kala duwan ee maaraynta sida farsamooyinka wareysiga xirfadeed, fududeynta kulamada iyo hirgalinta shaqada iskaashiga, habka qorista iyo isdhexgalka shaqaalaha, xirfadaha iyo kobcinta xirfadaha, ka hortagga halista shaqada iyo ugu dambeyn isgaarsiinta gudaha.
Ugu dambeyntiina, celceliska koorsada tababarka waxay u dhigantay 42 saacadood, yacni 2 ilaa 3 nooc oo ikhtiyaar ikhtiyaari ah celcelis ahaan shaqaalihii.
Wax kasta oo cusub ayaa daruuri u baahan ...
Koorso tababar casri ah oo loogu talagalay Laanta Caawinta Guriga July 10th, 2021Tranquillus
READ Awoodaha tababbarka horumarinta isdhexgalka shabakada ifocop
horeMiyaad ka fikirtay inaad tababarto shaqaalahaaga inta lagu jiro mudada aan firfircooneyn?
socdaSebtember 30, 2020 Qorshaha soo kabashada: waxaa loola jeedaa in lambar digbar laga dhigo tabobarka la siinayo